ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာကြီးမြတ်ခြင်းက နေရာနှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည် | Shwe Canaan TV
စရေးသူပြောသော လူပုဂိ္ဂုလ်တစ်ဦး၏ အသက္တာ၌ သူ၏ဂုဏ်အင်္ဂါ (သို့) တာဝန် ကိုခွဲခြားနိုင်ရန် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ချို့ရှိပါသည်။ ဥပမာ- ပြောရလျှင်၊ လူတစ...
အသက္တာ၌ သူ၏ဂုဏ်အင်္ဂါ (သို့) တာဝန်
ဥပမာ- ပြောရလျှင်၊ လူတစ်ဦးသည်အခြား
ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် ပင်ကိုယ်
ယေရှုက ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင် ဗတိ္တဇံ ဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောသူတယောက်မျှမပေါ်မထွန်းသေး (မဿဲ ၁၁း၁၁) ဟု ပြောပါသည်။ ခရစ်တော်က ယောဟန်သည် နောဧ၊ ဒံယေလ (သို့) ယောဘတို့ထက် ဂုဏ်အင်္ဂါပိုကောင်းသည်ဟူ၍မဆိုလိုပါ။ နောက်ပြီး၊ ယောဟန်သည် သူတို့ထက်ပို၍ကျက်သရေရှိသည်၊ ဘုရားတရားကိုပို၍ကြည်ညိုသည်၊ ပို၍နူးညံသိမ်မွေ့သည် (သို့) ပို၍ချစ်ခင်တတ်
သည် ဟုလည်းမဆိုလိုပါ။ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၏မေရှိယရှေ့ပြေးနောရ (တာဝန်) သည် အရင်ကျသောသူအားလုံး၏နေရာ (တာဝန်) ထက်သာလွန်၍ ကြီးမြတ်သည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ သခင်ဘုရား၏သွားရာလမ်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရသောအခွင့်၊ ြွကရောက်လာမည့်အကြောင်းကိုကြော်ငြာရသောအခွင့်နှင့် သူ့ကိုနှစ်ခြင်းပေးရသောအခွင့်ထူးများကို မရကြပါ။ ဤအချက်များကြောင့်နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်သည် တမူထူးခြားသောသူဖြစ်သည်။
နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်၏နေရာ (တာဝန်) ပို၍ကြီးမြတ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပြီးသည်နှင့်တဆက်တည်းတွင်၊ သခင်ယေရှု . . . သို့သော်လည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် အငယ်ဆုံးသောသူသည် ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏ (မဿဲ ၁၁း၁၁ခ) ဟု ပြောပါသည်။
ဤကျမ်းချက်ကလည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူသည် ယောဟန်ထက်ပို၍ကောင်းသောပင်ကိုယ်စရိုက် (သို့) အသက်တာရှိသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ယနေ့ယုံကြည်သူများသည် နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ကြော်ငြာခဲ့သောနိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြပါသည်။ ယောဟန်က သူသည် မင်္ဂလာဆောင်လုလင်၏မိတ်ဆွေ (ယော၊ ၃း၂၉) ဖြစ်သည်ဟု ပြောပါသည်။ ယနေ့ဘုရားသခင်၏သားသမီးအားလုံးတို့သည် သတို့သမီးဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကျမ်းပိုဒ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ- သတိုးသမီးသည် မင်္ဂလာဆောင်လုလင်၏မိတ်ဆွေထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောနေရာ (တာဝန်) ရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ကောင်းကင်တမန်ဂေါဗေလက မာရိအား ကျေးဇူးတော်ကိုခံသောမိန်းမ၊ သင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရားသည် သိနှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ သင်သည်မိန်းမတကာတို့ထက် မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည် (လုကာ ၁း၂၈) ဟုဆို၏။ မာရိသည် ဘုရားကိုကြည်ညိုသောသူ၊ ဣနြေ္ဒရသောသူနှင့်အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်သောသူဖြစ်ကြောင်း မေးစရာမလိုပါ။ သို့သော် မာရိ၏စစ်မှန်သောကြီးမြတ်ခြင်းမှာ၊ ခရစ်တော်၏လူ့ဇာတိခံယူရာ၌ သူ့အားမခင်နေရာယူရန်ရွေးကောက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်အား သူ၏ ကယ်တင်ရှင် (လုကာ ၁း၄၇) ဟုခေါ်ရန် မထိုက္တန္သူ၊ အပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ သူ၏ဂုဏ်အင်္ဂါသည်ရှုသ (သို့) ဟာန တို့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့သော်သူ၏တာဝန်မှာ အခြားအမျိုးသမီးများ၏ နေရာ (တာဝန်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။
တစ်ခါက၊ ချီးမွမ်းအံ့ဩသူတစ်ဦးက သခင်ယေရှုအား ကိုယ်တော်ကိုလွယ်သောဝမ်းနှင့် စို့တော်မူသောသားဖြတ်သည် မင်္ဂလာရှိပါ၏ (လုကာ ၁၁း၂၇) ဟု လျှောက်၏။ ကိုယ်တော်က ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံ၍ကျင့်စောင့်သောသူသည် မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည် (ငယ်၊ ၂၈) ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ခရစ်တော်၏နာခံသောနောက်လိုက်တဦးဖြစ်ခြင်းသည် သူ (ယေရှု) ၏မိခင်ဖြစ်ခြင်းထက်ပင်သာ၍ ကြီးမြတ်သည်။ မာရိသည် သခင်ယေရှုကိုဖွားမြင်ခြင်းထက် သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းသည် သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
အကျင့်စာရိတ္တနှင့် နေရာ (တာဝန်) ခြားနားမှု၏အရေးကြီးပုံကို ယောဟန် ၁၄း၂၈ ၌ ခရစ်တော်ဟောပြောသောစကားတွင် တွေ့ရပါသည်။ ငါတို့ ယခုသွားသော်လည်း သင်တို့ဆီသို့လာဦးမည်ဟု ငါပြောသောစကားကို သင်တို့ကြားရကြပြီ။ သင်တို့သည်ငါ့ကိုချစ်လျှင် ခမည်းတော်ထံသို့ ငါသွားမည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိကိုငြင်းပယ်သည့် အယူဝါဒလွဲသောသူများ (Cults) နှင့် အခြားသောသူတစ်ချို့တို့သည်ဤကျမ်းပိုဒ်၏နောက်ဆုံးစကား ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏ ကိုမှားယွင်းစွာအဓိပ္ပါယ်လွဲယကာ၊ သားတော်နှင့်ခမည်းတော်တူညီမှုနှင့် သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားကို ငြင်းပယ်ကြသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်က အဘယ်သို့ဆိုလိုပါသနည်း။ သခင်ယေရှုက ထိုသို့ပြောဆိုစဉ်တွင် လောက၌နေကာ၊ သူ၏ဖန်ဆင်းသောလူသားများ၏ရန်လိုမုန်တီးခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့် မတော်မတရားပြုခြင်းသာမက ငြင်းပယ်ခြင်း၊ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနှင့် အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းတို့ကိုခံရသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ခမည်းတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌စံမြန်ကာ ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံပြုမှုခြင်းမှလွတ်ကင်းသည်။ ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်သည် နေရာ (Posi-tion) အနေဖြင့် သားတော်ထက်ပို၍ကြီးမြတ်ကာ၊ သို့ရာတွင် ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာ၌ ပို၍မကြီးမြတ်ပါ။ တပည့်တော်တို့သည်သခင်ခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ကြပါက၊ ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားမည့် အကြောင်းကို သူပြောခဲ့စဉ်က ဝမ်းမြောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ သူသည်သူဖန်ဆင်းသော လူသားမ်ား ၏စော်ကားခြင်းနှင့်မတော် မတရားပြုခြင်းတို့ကို ဘယ်တော့ မွမခံရေတာ့ပါ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခရစ်တော်၏နေရာ (Position) သည် ခမည်းတော်၏နေ ရာနှင့်ခြားနားခြင်းမရှိဘဲ တူညီကာ၊ သူဖန်ဆင်းသောလူ သားများ၏ညှဉ်းဆဲခြင်း မှကင်းလွတ်သည်။
အခြေအတင်ပြော ဆိုသောအချက်သည် ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာနှင့် ဆိုင်သောအကျင့် စာရိတ္တနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် ကဏ္႑အားလုံး၌ ခမည်းတော်နှင့်တန်း တူရည်တူဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်သည် လောက၌အပြစ်သား များ၏ဆန့်ကျင်တိုက် ခိုက်ခြင်းကို ခံနေရသည့် အချန်ကာလတွင် ခမည်းတော်သည် နေရာ အားဖြင့် သားတော်ထက်ကြီးမြတ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် . . . ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်
ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်ကြီး ၁၂ တွင် သခင်ယေရှုက၊ သူသည် ဗိမ္မာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်သည် (ငယ် ၆)၊ ယောနထက်ကြီးမြတ်သည် (ငယ် ၄၁)၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးမြတ်သည် (ငယ် ၄၂) ဟု ပြောပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၊ ခရစ်တော်သည် ဗိမ္မာန်တော်၏ပုံစံကိုရေးဆွဲသူ၊ ဘုရားဝတ်ပြုရန်ထုံးနည်းများကို စတင်တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူ၏ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာ၊ ဟောပြောသည့်ဒေသနာ၊ အကျိုးရလာဒ်နှင့်ပက်သက်၍ ပရောဖက်ယောနထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်။ ဘုန်းအသရေနှင့်ဏ်ပည်၌လည်း၊ ရှောလမုန်မင်းကြီးထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်သည် ရှောလမုန်၏စိတ်ထဲတွင့်ဏ်ပညာကိုပေးသွင်းသောသူဖြစ်သည်။
အယဘုယျအားဖြင့် ရှေ့နောက်စကားအဆက်အစပ်က အဓိကအကြောင်းအရာသည် ပိုဂိ္ဂုလ်ရေးရာနှင့်ဆိုင်သော ဂုဏ်အင်္ဂါ (သို့) နေရာနှင့်ဆိုင်သောဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာဖေါ်ပြပါသည်။ သခင်ယေရှုအားကိုးကားဖေါ်ပြသော ကျမ်းပိုဒ်တိုင်းတွင် သူ၏ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ သာမွေမးစရာမလိုပါ။ သူသည်အကြီးဆုံးသောသူနှင့်အကောင်းဆုံးသောသူတို့ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်သည်။
၁။ အသင်းတော်နှင့်နိုင်ငံတော် အကြောင်းရေးသည့်အခန်းကိုဖတ်ပါ။
၂။ အတိအကျဘာသာပြန်ဆိုပါက သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာ ဟူ၍ျဖစ္ကာ၊ နိုင်ငံတော်ကိုဖေါ်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ နိုင်ငံောတ်သည် ရှင်ဘုရင်၌တည်နေသောကြောင့် သာ၌ကြီးမြတ်သောပုဂိ္ဂုလ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။
Shwe Canaan TV: ပုဂိ္ဂုလ်ရေးရာကြီးမြတ်ခြင်းက နေရာနှင့်ဆိုင်သောကြီးမြတ်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်